travelnetherlands Archives | Save A tareenka
Amsterdam waa magaalo cajiib ah in ay booqasho. Waxaa jira wax badan si ay u arkaan oo halkan ku samaynayno oo aad u badan tahay marna aad caajis doonaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli noqon lahaa weyn ilaa qaso wax. Saas waxaa ugu wacan Amsterdam sedani tahay bilaw weyn dhowr cajiib ah…
Haddii aad booqanaysid Amsterdam markii ugu horeysay ama ku soo noqonaya haddana mar kale baadi kanaalada qurux badan, waxaad u baahan doontaa in la ogaado oo ku saabsan waxyaalaha ugu gaar ah si ay u sameeyaan Amsterdam! Haddii aad diyaar u ah inay doondoonaan adventures ka baxsan waddo Damrak ee Amsterdam, this…
macmacaanka Local ku yimaadaan noocyo badan oo dhan Europe. Waddan kasta iyo gobol ay dawayn yar u gaar ah waxay ku faraxsanahay in ay bixiyaan. Dalxiisayaasha la ilig macaan, Ma jiro wax ka badan qurxiyey oo ku saabsan safarka badan dhadhankii cusub. Halkan waxaa noo top 5 ugu fiican…
Socotada la ilig macaan, fiiro gaar ah! Waxaad laga yaabaa in aan ku fikiray in ay ku safraan Europe oo keliya aawadood oo ah isku dayaya baxay macmacaan, laakiin waa in aad. Europe ayaa qaar ka mid ah macaan cajiib ah in aad soo dejin doonaa dhaw in ay dhaqanka ee dalka aad sahaminta….
U safarka arki indhaha waa doorasho weyn - laakiin waxa haddii aad kaliya doonayaan in ay leeyihiin xiiso leh? Haddii ay sidaa tahay, waxaa jira magaalo iyo cawayska ugu fiican, iyo helitaanka waxaa tareen waa wax fudud oo aan qaali ahayn. Waayo, xayawaanka xisbiga, ma jiraan wax jira…
Haddii aad u yaabsan meesha laga helayo matxafyada ugu fiican Yurub, waxaan kugu daboolay! Haddii ay tahay tahay, taariikhda qaranka ama dabiiciga ah, matxafyada ka our liiska ma uu taag darnaan doono inay idin yaabiyo. Waa maxay more, waxaad ku gaari kartaa meelahaas oo dhan tareenka…
Dabaal Maalinta King ee Netherlands iyo sidoo kale waxaa laga yaabaa in xisbiga ee Holland ugu fiican. on 27 April, waxay u dabaal dhalashadiisa King Willem-Alexander ayaa la music, dhinacyada waddooyinka, suuqyada tagfi, iyo alaabtaada, madadaalo. boqorkiina wuxuu ku dhex marta dalka oo la socda qoyskiisa. On habeen ka hor…
Ma ay goori goor tahay in la qorsheeyo lagu baxsado ee March, ka hor rush Easter ah. Iyadoo kids iyagoo fasax, hadda waa waqtigii loo heli lahaa fursadda lagu booqdo jasiiradaha yar ee quusi ​​kara qof aad jeceshahay, embark upon the first great family travel…